လတ်ဗီးယားလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (SIA) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကလတ်ဗီးယားလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (SIA) ကန့်အသတ်တာဝန်ယူမှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကမ်းလှမ်းအပေါင်းတို့နှင့်အတူရှယ်ယာနိုင်ငံခြားသားများအားဖြင့်လုံးဝပိုင်ဆိုင်စေခြင်းငှါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားသားတွေနှင့်အတူအလွန်ရေပန်းစားသည်။
လတ်ဗီးယားမြောက်ပိုင်းဥရောပအတွက်ဘောလ်တစ်ဒေသတွင်း၌တည်ရှိသည်။ ဒါဟာတရားဝင် "လတ်ဗီးယားသမ္မတနိုင်ငံ" ဟုခေါ်သည်။ ဒါဟာအနောက်ဘက်ဆွီဒင်နှင့်အတူရေကြောင်းနယ်စပ်နှင့်အတူ, အရှေ့ဖို့အရှေ့တောင်ဘက်, ရုရှားဖို့ရုစ်, မြောက်ဘက်မှတိုးနီးယား, တောင်ဘက်မှလစ်သူနယ်စပ်။
နိုင်ငံရေးအရပါကတစ်ဦးရွေးချယ်တင်မြှောက်တအိမ်တည်းဥပဒေပြုရေး, တစ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့်အတူတစ်ဦး "ဒီမိုကရေစီပါလီမန်သမ္မတနိုင်ငံ" အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဒါဟာငါဒေသတွင်းနိုင်ငံအသစ်များဖန်တီးကမ္ဘာစစ်၏အဆုံးပြီးနောက် 1918 အတွက်လူတမျိုးအဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ 1940 မှစ. 1991 သည်အထိပြုလုပ်ရုရှားထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
လတ်ဗီးယားလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (SIA) တို့ကိုအကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကလတ်ဗီးယားလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (SIA) ကိုအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုကမ်းလှမ်း:
• 100% နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ဆိုင်မှု: နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦး SIA အတွက်ရှယ်ယာအားလုံးပိုင်ဆိုင်စေနိုင်သည်။
•တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: သာလျှင်တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တစ်ဦး SIA ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်ပါသည်။
•တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ: အဆိုပါဝါးရှယ်ယာရှင် SIA ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်သောညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်လာပေမည်။
•အနိမျ့မြို့တော်: အဆိုပါနိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်လက်ရှိအချိန်တွင်သာ 3,000% မှတ်ပုံတင်မတိုင်မီပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်ဘယ်မှာ 50 ယူရိုဖြစ်ပါတယ်။
•အသေးစားကုမ္ပဏီ: SIA တစ်ဦးအနိမ့်ရှယ်ယာမြို့တော်လိုအပ်နေသူများကဖန်တီးနိုင်ပါသည်တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ (မိုက်ခရို) ကုမ္ပဏီ။
•အီးယူအဖွဲ့ဝင်: 2004, လတ်ဗီးယားသည်အခြားအီးယူအဖွဲ့ဝင်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သွားရန် သာ. ကွီးမွတျအခွင့်အလမ်းများပေးဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) ၏အပြည့်အဝအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်ကတည်းက။
•အစာရှောင်ခြင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း: သာလျှင် 1 မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်းခွင့်ပြုချက်3ရန်။
•အနိမျ့အခွန်: တစ်မိုက်ခရိုကုမ္ပဏီတစ်ခုသာ 9% ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကိုချေ။ သို့သော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်မှဘာသာရပ်အမေရိကန်နေထိုင်သူများနှင့်လူတိုင်းမိမိတို့၏အစိုးရများအားလုံးကိုဝင်ငွေကြေညာရပါမည်။
လတ်ဗီးယားလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (SIA) အမည်
SIA ကိုကုမ္ပဏီအမည်ကိုလတ်ဗီးယားအတွက်အခြားမည်သည့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားဥပဒေရေးရာ entity ရဲ့နာမညျကိုကနေလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ရမည်။ အစိုးရနှင့်မှတ်ပုံတင်ကုမ္ပဏီအမည်များတစ်ဦးကစစ်ဆေးမှုများကြိုတင်မှတ်ပုံတင်မှအမည်ဖြင့်ရရှိနိုင်ဘို့ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီအမည်များကိုကငျြ့ကွံစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏သဘောသဘာဝအတိုင်းအများပြည်သူလှည့်ဖြားထားတဲ့စကားလုံးများဆံ့မခံနိုင်သည်။ အသစ်ကကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအမျိုးအစားလုပ်ဆောင်သွားရန်အထူးလိုင်စင်ရရှိသွားမဟုတ်လျှင်စကားတို့ကို "ဘဏ်", "အုပ်စု" သို့မဟုတ် "အာမခံ" ကို အသုံးပြု. ကုမ္ပဏီအမည်များကိုပယ်ချလိမ့်မည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအမည်နှင့်အားလုံးစာရွက်စာတမ်းများသင်သည်ဘာသာစကား Latvian တွင်သို့မဟုတ်တစ်ဘာသာပြန်ချက်ဖြင့်လိုက်ပါသွားအခြားဘာသာစကား၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ရမည်ဖြစ်သည်။
နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှတ်ပုံတင်မည်နှင့်အတူတင်သွင်းထားတဲ့ငွေပမာဏကိုအတည်ပြုတဲ့စာရွက်စာတမ်းထုတ်ဝေထားတဲ့ဒေသခံတစ်ဦးဘဏ်နှင့်အတူငွေဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံး SIA ရဲ့ 50 ယူရို၏လက်ရှိတန်ဖိုးနိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်၏ 3,000% ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်နေစဉ်, (ကနိမ့်နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်နှင့်အတူ) မိုက်ခရိုကုမ္ပဏီကြိုတင်မှတ်ပုံတင်မှအပြည့်အဝငွေပမာဏကိုပေးဆောင်ရပါမည်။
အသေးစားကုမ္ပဏီများက "မိုက်ခရို" ကုမ္ပဏီများမှအဖြစ်လူသိများလတ်ဗီးယားအတွက်အသိအမှတ်ပြုထားပါသည်။ SIA ကိုရပါမည်ကို "မိုက်ခရို" ကုမ္ပဏီအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်:
•ငါးဦး (5) ရှယ်ယာရှင်များ၏တစ်ဦးကအမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုလျက်,
အားလုံးစာရွက်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ပြီးတာနဲ့ကုမ္ပဏီအမည်အား Enterprises ၏မှတ်ပုံတင်မည်သို့ဝငျပါလိမ့်မည်။ ဤအချက်မှာ, SIA ကိုဥပဒေကြောင်းအရဖြစ်ပါတယ်နှင့်စီးပွားရေးပို့ချစတင်နိုင်ပါတယ်။
အားလုံးအသစ်ကကုမ္ပဏီတွေကတရားဝင်ပြန်တမ်းမှာသူတို့ရဲ့အသေးစိတ်ကိုထုတ်ဝေရန်ရမယ်အားလုံးဥပဒေသစ်များ, အစိုးရစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, နှင့်စည်းမျဉ်းများကိုထုတ်ပြန်ပေးသော "Latvijas Vēstnesis" ဟုခေါ်။
တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တစ်ဦး SIA ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များကသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ကမည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်အပေါင်းတို့နှင့်နိုင်ငံများတွင်နိုင်ငံသားများ၏ဖြစ်နိုင်သည်။
SIA ကိုက၎င်း၏ရှယ်ယာရှင်များအဘို့ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အတူစီးပွားဖြစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦး SIA အဘယ်သူ၏ရှယ်ယာကိုရောင်းခြင်းသို့မဟုတ်အများပြည်သူနှင့်ကုန်သွယ်ကြသည်မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါရှယ်ယာမြို့တော်မြို့တော်ရှယ်ယာ (သို့မဟုတ်စတော့ရှယ်ယာ) ၏စုစုပေါင်းငွေပမာဏတန်းတူတန်ဖိုးကိုပါဝင်ပါသည်။
လှူဒါန်းခဲ့သည့်အခါဝေမျှမယ်မြို့တော် (အံ LVL အတွက်) လက်ရှိတန်ဖိုးပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုကို အသုံးပြု. အကဲဖြတ်အတွက်ငွေသားပေးချေသို့မဟုတ်နိုင်ပါသည်။ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုပံ့ပိုးမှုများကိုသာဖွဲ့စည်းရေးသဘောတူညီချက်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်ပြည်တွင်းရေးစည်းမျဉ်းများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သာငွေသားပံ့ပိုးမှုများလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအဘိုးပြတ်ကျွမ်းကျင်သူအဆိုပါမှတ်ပုံတင်အရာရှိများကအတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည့်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၏တန်ဖိုးကိုအကဲဖြတ်ရပေမည်။
တစ်ဦး SIA များအတွက်နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော် 2,000 LVL (လက်ရှိ 3,000 ယူရို) ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါရှယ်ယာမြို့တော်အလားတူတန်းတူတန်ဖိုးကိုခွဲခြားရှယ်ယာသို့ခွဲခြားထားတယ်။ လျှောက်လွှာအသစ်က SIA ၏မှတ်ပုံတင်လုပ်သောအခါရှယ်ယာမြို့တော်၏ 50% ၏တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးကိုတက်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
တိုင်း SIA ကုမ္ပဏီ၏ဌာနချုပ်ဖြစ်သောဒေသခံတစ်ဦးဥပဒေရေးရာလိပ်စာထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဥပဒေရေးရာလိပ်စာကုမ္ပဏီ၏ဥပဒေရေးရာလိပ်စာသို့ပို့အားလုံးစာပေးစာယူကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကလက်ခံရရှိခဲ့ကြသည်မှယူဆပါလိမ့်မည်မထွက်ရရှိရာအားလုံးအရာရှိတဦးကသတိပေးချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကို 15% ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်မိုက်ခရိုကုမ္ပဏီသာနေသမျှကာလပတ်လုံးစုစုပေါင်းဝင်ငွေ9ယူရိုထက်မပိုပါဘူးအဖြစ် 100,000% ချေ။ အဆိုပါပိုလျှံနေတဲ့ 20% နှုန်းအခွန်ကောက်လိမ့်မည်။
အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝင်ငွေအခွန်နှုန်းကိုလတ်ဗီးယားနေထိုင်လိုသူများအတွက်နိုင်ငံခြားသားများအဘို့အ 24% ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်: အမေရိကန်အခွန်ထမ်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်မှဘာသာရပ်လူတိုင်းကသူတို့အခွန်အေဂျင်စီအားလုံးဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်ဘူးအဖြစ် IRS ကိုအားလုံးကမ္ဘာတွင်ဝင်ငွေထုတ်ဖော်ရပေမည်။
ပညတ်တရားအားဖြင့်, မှတ်ပုံတင်နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြစ်စဉ်ကို 30 ရက်ပေါင်းအထိကြာလိမ့်မည်။ သို့သော်ဘုံအလေ့အကျင့်ကြောင့်သာမန်အားဖြင့်ခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိရန်မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းအားလုံးတင်ပြပြီးနောက်သုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရက်တဦးတည်းအနေဖြင့်ကြာမြင့်ကြောင်းဆိုထားသည်။
တစ်ဦးကလတ်ဗီးယားလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (SIA) အကြိုးခံစားခှငျ့ဤအမြိုးအစားရှိပါတယ်: အသေးစားကုမ္ပဏီများ, အနိမ့်ရှယ်ယာမြို့တော်လိုအပ်ချက်များကို, တစ်ဦးတည်းသောဒါရိုက်တာကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုနှင့်အီးယူအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နိုင်သူတဦးတည်းရှယ်ယာရှင်များအတွက်နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုမြန်ဆန်မှတ်ပုံတင်ရေး, အနိမ့်အခွန်များပြည့်စုံ။